प्रमाद, प्रहसन र तमासा : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार प्रमाद, प्रहसन र तमासा
दार्शनिक फ्रेडरिक नित्सेले भनेका छन्, ‘जबजब म माथिमाथि चढ्दै जान्छु, तबतब अहंकार नामको कुकुर मेरो पछि लाग्दछ ।’ नेपाल अहिले इतिहासको यस्तो घडीमा उभिएको छ, जहाँ प्रमाद, अहंकार, सत्तालिप्सा, घुर्की, कलाहीन प्रहसन र विक्षादको संयोजन देख्न सकिन्छ । सरकारमा हुनेहरू अज्ञात लोकबाट आफूले जे भन्यो, त्यही फलको वर्षा गर्ने कल्पवृक्ष ल्याउने सुन्दर सपना बाँड्नमा मग्न छन् । उता प्रतिपक्ष मात्र होइन, सरकारबाहिर रहेका (सत्तारूढ दलकै) उच्च पदस्थसमेत सरकार क्रमशः असफल र निरीह हुँदै गएको आँकलन गर्दै छन् । कसैलाई म नै यो देशको ‘तारणहार’ हुँ भन्ने दम्भ छ । सायद उनी सोच्दछन्, ‘म छु र पो यो देश छ ।’ कसैलाई लाग्दछ, ‘यो देशको बरबादीको कारण ‘म’ प्रधानमन्त्री हुन नपाउनु हो ।’
सत्तामा पलाएको उन्मत्तता, आत्मश्लाघा र असम्भव प्रतीत हुने अतिरञ्जनापूर्ण लफ्फाजी सुन्दासुन्दा थकित जनता आज आएर कोभिडरूपी दुःसाध्य महामारीको चपेटामा छन् । नेपाली जनता देशभित्र प्रदर्शन भइरहने सत्तालिप्साको नाटक हेर्न र त्यसको दुष्परिणाम भोग्न अभ्यस्त नै थिए । जनता यो सत्ता र शक्तिको चाकाचुलीलाई एक वीभत्स खेलका रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो कर्ममा तल्लीन थिए । किन्तु, नेपाली जनताले कोरोनाको दुष्कर विषाणु मात्र होइन, छिमेकी ‘मित्र’ देशले पिलाएको अपमानको विषसमेत यसै समयमा उपहारका रूपमा पाएका छन् ।
अलि अघिसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नेताहरूमा आंशिक सत्यधारणा थियो । उनीहरू सोच्दथे, ‘सामन्ती, केन्द्रीकृत र निरंकुश सत्ताका कारण यो देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन ।’ किन्तु सायद उनीहरूमा अर्को अत्यन्तै भ्रान्त धारणा पनि थियो । उनीहरू सोच्दथे र सायद अहिले पनि सोच्दछन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि साराका सारा जनता उनीहरूको इसारामा नाच्नेछन् ।’ छिमेकी र अन्य मुलुक उनीहरूसामु नतमस्तक हुनेछन् र सहजै समृद्धि पनि प्राप्त हुनेछ । उनीहरूले सोचे कि उनीहरू अभूतपूर्व रूपमा योग्य छन् । जेलमा बिताएका वर्षहरू, पढेका शास्त्रीय सिद्धान्तका ठेलीहरू र गाउने गाना एवं बजाउने मुरलीहरू नै समृद्धिका द्योतक हुन् । तर, वास्तविकता कठोर र निष्ठुर हुन्छ । वास्तविकताले जेलमा बसेका वर्षहरूको गणना गर्दैन । वास्तविकताले सपना बुझ्दैन । वास्तविकताले त कर्मलाई मात्र बुझ्दछ । वास्तविकताले त इमान, जमान, सदाचार, शालीनता र सुशासन मात्र बुझ्दछ ।
वास्तविकताले सपना बुझ्दैन; मात्र कर्म, इमान, जमान, सदाचार, शालीनता र सुशासन बुझ्छ
यी नेतावृन्द बारबार उही कुराको सपना बाँड्दछन् । उनीहरू बारबार आफूले बर्सााएका ‘फूलझडी’हरूबाट जनता जनार्दनलाई पुलकित पार्ने प्रयास गर्दछन् । उनीहरू आफ्ना ती पूर्वकथन बिर्सेर हो या जनताले बिर्से भन्ने ठानेर हो, पुनःपुनः त्यही कुरा कहिरहन्छन् । भनिन्छ, बिर्सने बानीको एउटा ठूलो फाइदा छ । बिर्सने बानीले गर्दा एउटै कुराबाट बारम्बार ‘पहिलो आनन्द’ प्राप्त गर्न पाइन्छ । यस्ता कुरालाई लिएर विरोध र आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । सत्तालाई सत्य कुरा देखाइदिनु र सावधान गराउनु सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो । किन्तु, सत्तालाई सत्य कुरा हजम हुँदैन । सत्तालाई सत्य कुरा सुन्नमा रुचि हुँदैन । सत्तालाई सत्य कुरा सुनियो र मनन गर्नतर्फ लागियो भने आफ्नो भ्रम टुट्ने डर हुन्छ । यो करिबकरिब सत्ताको सार्वभौम नियम हो । राज्यलक्ष्मीको भोग गर्नुलाई मात्र लोकतन्त्रको उपलब्धि मान्ने नेपाली ‘राजनीतिक प्राणी’को त झन् के कुरा गर्नु ?
हामीकहाँ नाटकको पर्दाभित्र मात्र नभई पर्दाबाहिरको संसार पनि अनौठो छ । सत्ता र शक्तिको विरोध र आलोचना गर्ने नाममा राजनीतिक नेताका वैयक्तिक, पारिवारिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील विषयमा समेत अप्रिय र अपाच्य छेड हान्ने चलन पनि झाँगिदै गएको छ आज । राम्रा कुरालाई राम्रो भन्न नसक्ने, हरेक मामिलामा खोट र खराबी मात्र देख्ने दृष्टिदोषले गर्दा के सत्य, के असत्य सबै बराबर भएको छ । समाजमा अनाहकको भ्रान्ति फैलाएर सस्तो लोकप्रियता कमाउने होड पनि खुब चलेको छ । सत्तासीनहरूको दोहोलो काड्ने नाममा केही सत्ताहीनहरू बडो जोडतोडले ‘भाइरल’ भइरहेका छन् ।
मिथ्या कुरालाई तामझामसाथ सत्य हो भनी प्रचार गर्ने र सत्य कुरालाई समेत मिथ्या हो भनी भ्रम सिर्जना गर्ने दुवै दोषी हुन् । किन्तु, लोकतन्त्रमा सहनशील र शालीन हुनु सरकारको परम् कर्तव्य हो ।
राज्यका तीन शक्ति (शक्तित्रय) हुन्छन् । ती हुन्, प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति र उत्साहशक्ति । लोकतन्त्रको अर्को अनिवार्य शक्ति हो लोकशक्ति । हाम्रो सरकारसँग उत्साहशक्ति प्रचुर देखिन्छ । मतादेशबाट बनेको हुँदा यो सरकारसँग लोकशक्ति पनि छ । तथापि, मन्त्रशक्तिमा यो सरकार सफल हुन सकेन । प्रभुशक्तिका दुई आयाम छन्, आन्तरिक प्रभुशक्ति र बाह्य प्रभुशक्ति । वर्तमान सरकार आफ्नो कार्यकालको आरम्भमा प्रभुशक्तिको मामिलामा पनि केही सफल देखिएको हो । किन्तु, यसले दिनानुदिन आन्तरिक प्रभुशक्ति गुमाइरहेको छ । बाह्य प्रभुशक्तिको मामिलामा त यो सरकार फगत तमासा बन्ने अवस्था देखिँदै छ ।
सरकारलाई प्रमादमा रमाउने र असम्भव योजनाको प्रदर्शन गरी प्रहसन गर्ने दुवै सुविधा किमार्थ छैन
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको नियत नै खराब भयो भनेर किटानीसाथ भन्न सकिने अवस्था अझै आइसकेको छैन । तर, सरकारले गलत यात्रापथ रोजिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न भने खडा भएको छ । मुलुक संकटको घडीमा छ । किन्तु, सत्तारूढ दलभित्रको छिनाझपटी, बाझाबाझ (संवाद र माझामाझ होइन) र विकृत झमेलाले गर्दा सरकार दोहोरो मारमा परेको प्रस्ट देखिन्छ । सरकार आज यस्तो हलीजस्तो भएको छ, जहाँ आफ्नै बाउसेहरू हलो हिँडाउने बाटोमा ढुंगा राखेर हलो भाचिने अवस्था ल्याउने र दोष जति हलीलाई दिने ‘फिराक’मा छन् । घरमा समस्या परेको घरधनीले घर सम्हाल्नै हम्मे परिरहेको परिवेशमा कसरी बाह्य मामिलालाई सफल बनाउनु ?
देशलाई अहिले कोरोनाको महामारीले सकसमा पारिरहेको छ । देश महासंकटको सम्मुख छ आज । सरकार यता टाल्यो उता च्यातिने र उता टाल्यो यता भ्वाङ पर्ने परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका सारा नेपाली जनता निर्मम विपत्तिको सामना गर्न अभिशप्त छन् । यही समय पारेर निकटतम छिमेकी देश नेपालको छातीमाथि सवार भएका छन् । सधैं ‘मलाई नेपाली जनताको प्रेमले आकर्षित गरिरहन्छ’ भनी लफ्फाजी गर्ने छिमेकी देशको प्रमुख कार्यकारीले फेरि पनि धोका दिएको छ । विकट पहाडी इलाकामा रातारात त्यति ठूलो निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्दैन । त्यसका लागि निकै लामो समय लाग्यो होला । तर, नेपाल सरकारले चालै पाएन । सरकार प्रमुख नै यस्तो संवेदनशील मामिलामा बेखबर रहनु अत्यन्तै दुःखद र पीडादायी कुरा हो । यति ठूलो सैनिक, प्रहरी र जासुसी संयन्त्र रहेको सरकारको यो दुर्दशा ! विचित्र छ ।
कतिपय ‘स्वनामधन्य’हरूलाई यो घटनाले प्रहसन गर्ने अर्को मौका प्रदान गर्न पुग्यो । विगतमा सरकारको महत्वपूर्ण पदमा बसेका महानुभावहरूसमेत यो मिचाइ र हेपाइ आजको सरकारकै पालामा भएजस्तो गरी अतिरञ्जना गर्दै छन् । अहिले धेरै जना ‘प्रत्युत्पन्नमति’ भएका छन् । कतिपय ‘त्वरित् राष्ट्रवाद‘को प्रहसन गर्नमा मग्न छन् । उता सरकार धागो छिनेको चंगाजस्तो भएको छ । झन्डै ६० वर्षअघि सुरु भएको मानिएको घुसपैठ आज ‘सेमिफाइनल’मा पुगेको छ । यसलाई फाइनलमा पुग्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी भने सौभाग्य-दुर्भाग्यवश यस सरकारको काँधमा आएको छ ।
अप्ठेरो समयमा चिर ‘बापवैरी’लाई जस्तो व्यवहार गर्ने छिमेकीलाई गाली गरेर या सरापेर समस्याको समाधान हुँदैन । किन्तु, आफ्नो अस्मितामा चोट पर्दा नेपाली जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । यो ठूलो शरीर, तर सानो हृदय भएको छिमेकीले गरेको असह्य र दुःखद व्यवहार हो । तथापि, सरकारले अत्यन्तै धीर र गम्भीर भएर शान्त र शालीन कूटनीतिलाई अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । भनिन्छ, कूटनीतिमा आफू बेबकुफ भएको पत्तो पाउँदासम्म समय घर्किसकेको हुन्छ । कूटनीतिमा कुराले मीठो बनारसी ‘बालुसाही’ खुवाउने तर व्यवहारमा झुक्याएर पीरो ‘गुजराती’ खुर्सानी कोचिदिने काम पनि हुन सक्छ ।
जहिलेसम्म नेपाल आफैं समृद्ध हुँदैन, तबसम्म भारतको चिसो र चोटिलो बाछिटा आउन छाड्नेछैन । हामीले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो हितको रक्षा गर्नु भनेको वर्षामा छाता ओढेजस्तै हो । छाता ओढे तापनि वर्षा त हुन्छ नै । तर, बलियो छाता भयो भने त्यो वर्षा बलेनी बनेर शान्त रूपमा किनारा लाग्छ । अब सरकारलाई प्रमादमा रमाउने सुविधा छैन । सरकारसँग असम्भव योजनाको प्रदर्शन गरी प्रहसन गर्ने सुविधा पनि किमार्थ छैन । अन्य प्रत्युत्पन्न र ‘त्वरित् राष्ट्रवादी’हरूले तमासा र अतिरञ्जना गर्नुको पनि कुनै प्रयोजन छैन । बाहुबल र अस्त्रबल नहुनेको बल नै बुद्धिबल हो । हाम्रो कूटनीति जोसिलो नभई, होसिलो, संयत, शान्त र शालीन तर अडानयुक्त हुनु आवश्यक छ ।
नेकपा अध्यक्षद्वयको छलफलपछि सचिवालयको बैठक बोलाइने
काठमाडौं । सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कमिशन बार्गेनिङ अडियो सार्वजनिक भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली...
Not-to-be-missed Kumar Raut - March 23, 2020 0
फुटबल फर्किदाको फरक दृश्य
Not-to-be-missed Kumar Raut - May 18, 2020 0
म्युनिख । कोभिड–१९ को महामारी र त्रासका कारण विश्व खेलकुद ठप्प बन्दा खेलाडीहरूले झन्डै ६५ दिनदेखि खेल्न तथा समर्थकहरूले खेलको मजा लिन पाएको थिएनन्...
भर्खरै Kumar Raut - September 26, 2020 0
Exclusive Rajdhani Online - February 11, 2020 0
पोखरा । प्राकृतिक विपत्तिका साथै समयसमयमा फैलिने रोगजन्य प्रकोपको प्रभाव नेपाली पर्यटन बजारमा पर्ने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षमा विनाशकारी भूकम्प, हिम आँधी,...
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - September 23, 2020 0
घरै बस्छन् कोरोना संक्रमित, आइसोलेशन र क्वारेन्टाइन रित्तै
चुरे मकवानपुर । कोरोना संक्रमित दैनिक जसो बढेता पनि बागमती प्रदेशमा सरकारी क्वारेन्टाइन र आइसोलसन वार्डहरु भने खाली देखिएका छन् । घरैमा बसेर कोरोना...
Editor-Picks Kumar Raut - June 22, 2020 0
असन्तुलित र अपरिपक्व राजनीति र वर्तमान गतिरोध
बिचार Kumar Raut - January 4, 2021 0
नेपालमा सधैं राजनीतिले दीर्घकालीन सोच बनाएन, सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै रह्यो । नेपाल सानै देश भए पनि सामरिक महत्वका हिसाबले भारत, चीनलगायत...
अनियन्त्रित बन्दै कोरोना
भर्खरै Kumar Raut - August 19, 2020 0
काठमाडौं । मंगलबार नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार मात्रै १ हजार १६...
भद्रपुर-काठमाडाैकाे हवाई भाडा १३९५
टिकाराम नेती - May 2, 2021